Mintigo: isa azo isaina ho an'ny orinasa
Alarobia, Novambra 19, 2014 Alarobia 26, 2015 Douglas Karr
Amin'ny maha mpivarotra B2B antsika dia fantatsika rehetra fa ny fananana rafitra scoring fironana hamantarana ireo mpitarika vonona ny varotra na ireo mpividy mety ho zava-dehibe amin'ny fampandehanana ireo programa fitakiana fitadiavana fahombiazana sy ny fitazonana ny fampifanarahana amin'ny varotra sy ny varotra. Fa ny fampiharana ny rafitra firaketana isa izay tena miasa dia mora lazaina kokoa noho ny vita. Miaraka amin'i Mintigo dia azonao atao izao ny manana maodely scoring firaka izay mampiasa ny herin'ny analytics mialoha sy ny angon-drakitra lehibe hanampiana anao hahita haingana kokoa ny mpividy. Tsy maminavina intsony.
B2B Profiling sy Prospecting miaraka amin'i Mintigo
Alakamisy 1 martsa 2012 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Taorian'ny nandaozako ny indostrian'ny gazety, ny iray amin'ireo asako voalohany dia ny fananganana tahiry ho an'ny mpivarotra B2B. Mampiasa fitaovana avy amin'ny antoko fahatelo izahay ary nanamboatra fitaovana hanamboarana index manokana momba ny toetra firmagraphic eo amin'ny tobin'ny mpanjifanao. Raha atao teny hafa, dia hampahafantatra ireo mpanjifanao tsara indrindra izahay amin'ny alàlan'ny fidiram-bola, isan'ny mpiasa, kaody indostrialy, taona niasa, toerana ary toerana hafa mety ho hitay. Raha vantany vao fantatray ny endrik'ilay mpanjifa iraisana, izahay